Nepse Online शेयर बजारबारे जथाभावी अभिव्यक्ति नदिन बोर्डको चेतावनी, यस्तो सम्म हुन्छ कारबाही ! – nepseonline
Friday 05-20, 2022, 1:22 pm
शेयर बजारबारे जथाभावी अभिव्यक्ति नदिन बोर्डको चेतावनी, यस्तो सम्म हुन्छ कारबाही !
काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर खरिद वा बिक्री गर्न उत्साहित गराउने उद्देश्यले सूचना सम्प्रेषण नगर्न तथा नगराउन निर्देशन दिएको छ । केहि विश्लेषक वा सक्रिय लगानीकर्ता भएको भन्दै कुनै कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्छ वा घट्छ भनेर अभिव्यक्ति दिने गरेको पाइएको भन्दै बोर्डले यस्तो कार्य तत्कालै रोक्न आग्रह गरेको हो ।
बोर्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विभिन्न व्यक्ति र समूहले विभिन्न संचार माध्यम तथा सामाजिक संजालमा नेप्से परिसूचक तथा सूचिकृत संगठित संस्थाको शेयरको मूल्य बढ्ने वा घट्ने भन्दै निश्चित शेयरहरु खरिद गर्न वा बिक्री गर्न तथा विभिन्न शेयरहरु खरिद वा बिक्री नगर्न उत्साहित गराउने उद्देश्यले अनधिकृत तवरले अन्तरवार्ता र अभिव्यक्ति दिइरहेको देखिएको छ, त्यस्तो कार्य नगर्न नगराउन सबै सम्वद्ध पक्षहरुलाई एक सूचनामार्फत् सूचित गरिएको छ ।’